Yiba namava okuGqamza kweMelika kwiBeachfront Airstream
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguChristina
Hamba uyokulala phantsi kombambeli wamaphupha kwaye uvuke ujonge iimbono zolwandle kwindawo yethu yokuhlala ye-Art Deco ka-1965. Chitha i-surfing yasekuseni, ukuqubha okanye ukuhamba e-Sunrise Beach, emva koko uhlaziye ngeshawari evulekileyo phantsi kwe-blooming bougainvillea. Yonwabela isidlo sakusasa esimnandi kwindawo yethu yekofu yasekhaya ekufutshane nekona, okanye upheke eyakho kwikhitshi lethu elixhotyiswe ngokupheleleyo. Ukugqibezela usuku, toast ukuya ekutshoneni kwelanga kunye nebhotile yethu yewayini ebomvu yase-Italiya kunye netshizi yasekhaya ecaleni kwembono yolwandle kwi-hammock yethu.
Hamba uyokulala phantsi kombambeli wamaphupha kwaye uvuke ujonge iimbono zolwandle kwindawo yethu yokuhlala ye-Art Deco ka-1965. Chitha i-surfing yasekuseni, ukuqubha okanye ukuhamba e-Sunrise Beach, emva koko uhlaziye ngeshawari evulekileyo phantsi kwe-blooming bougainvillea. Yonwabela isidlo sakusasa esimnandi kwindawo yethu yekofu yasekhaya ekufutshane nekona, okanye upheke eyakho kwikhitshi lethu elixhotyiswe ngo…
“Vuka uve isandi samaza olwandle eqhekeza kwisanti ethambileyo yeNoosa ejonge elunxwemeni.”
- Christina, umbuki zindwendwe wakho
I-Hammock, Izitulo zokugcakamela ilanga
4.93 (iingxelo zokuhlola 154)
I-Airstream yethu ikwindawo yabucala, ephambi kolwandle e-Sunrise Beach kunye nolwandle olugadiweyo oluziimitha kuphela kude. Ezinye zezona ndawo zokutyela zaseSunrise kunye neSunshine Beach kunye neekhefi zikude nje ngonxweme. IBuzzing Hastings Street eNoosa ifikeleleka lula ngemoto/ibhasi okanye ngeenyawo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1697